NISY fampandrenesana nataon’i Anthony Morris, anisan’ny Filan-kevi-pitantanana, tamin’ny fivoriana isan-taona fanaon’ny Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania tamin’ny 3 Oktobra 2015. Hosoloana fivoriana vaovao hoe Ny Fiainantsika Kristianina sy ny Fanompoana, hoy izy, ny Sekolin’ny Fanompoana sy ny Fivoriana Momba ny Fanompoana ary ny Fianarana Baiboly. Hosoloana koa Ny Fanompoantsika Ilay Fanjakana ka Ny Fiainantsika Kristianina sy ny Fanompoana: Tari-dalana ho An’ny Fivoriana indray no hampiasaina. Mivoaka isam-bolana ilay tari-dalana ary misy pejy valo sady miloko. Ao ny fandaharan’ny fivoriana isan-kerinandro, ary misy sary hahatonga ny famakiana Baiboly hahaliana kokoa ao.
Misy fizarana telo ilay fivoriana vaovao:
Harena avy ao Amin’ny Tenin’Andriamanitra. Lahateny folo minitra ny tapany voalohany, ary miorina amin’ny famakiana Baiboly isan-kerinandro sy sary ao amin’ilay tari-dalana. Fanontaniana sy valiny kosa ilay tapany faharoa hoe “Andao Hikaroka Harena Miafina”, ka ny famakiana Baiboly amin’ilay herinandro no dinihina mandritra ny valo minitra. Misy famakiana Baiboly efatra minitra aorian’izay.
Fampiofanana Amin’ny Fanompoana. Matetika no misy mpianatra telo mampiseho ny fomba hitoriana sy hiverenana mitsidika ary hampianarana Baiboly, amin’ity fizarana ity.
Ny Fiainantsika Kristianina. Dinihina amin’ity fizarana ity ny fomba hampiharana ny toro lalan’ny Baiboly eo amin’ny fiainana andavanandro. Mampiavaka an’ity fizarana ity koa ny Fianarana Baiboly Ataon’ny Fiangonana.
Mankasitraka ny fiofanana azo amin’io fivoriana vaovao io ny mpitory maneran-tany. Hoy ny rahalahy iray any Aostralia: “Tsara be ilay Fivoriana Momba ny Fiainantsika sy ny Fanompoana! Azo ampiharina amin’izao fotoana izao ny hevitra ao, dia tsotra be ny fomba fitory. Tsy hitahita akory dia vita ny fivoriana satria fohy ny anjara, mivantana, mahaliana, indrindra fa rehefa misy video sy ankizy mandray anjara.”
Izao no nosoratan’ny anti-panahy ao amin’ny fiangonana iray any Italia: “Lasa manomana tsara kokoa izahay rehetra noho io fivoriana vaovao io, dia lasa mihamahay mampianatra. Hafakely ny fomba ampianaran’i Jehovah ny vahoakany amin’ity fivoriana vaovao ity. Hoy ny mpitory iray 15 taona: ‘Tsy vitako taloha ny mifantoka mandritra ny fivoriana manontolo. Nanampy ahy hifantoka sy hanomana tsara kokoa anefa ilay fivoriana vaovao.’”
Hoy ny fianakaviana iray any Aotrisy: “Sarotra taminay ny nanao ny famakiana Baiboly isan-kerinandro niaraka tamin’ny zanakay vavy folo taona. Nandrisika anay hamaly teny bebe kokoa anefa ilay fizarana hoe ‘Harena avy ao Amin’ny Tenin’Andriamanitra.’ Tianay telo mianaka izao ny manomana ny famakiana Baiboly isan-kerinandro, ary hitanay koa hoe mandroso tsara ny zanakay vavy.”
Hoy i Ines, any Alemaina: “Te hanomana tsara sy hisaintsaina lalina kokoa an’ilay zavatra ianarana aho. Mbola tsy nanao fikarohana be hoatr’izao aho. Akaiky kokoa an’i Jehovah aho izao. Na dia mandreraka be aza ny fiainana eto amin’ity tontolon’i Satana ity, dia mamelombelona ahy sy manampy ahy tsy ho kivy ny fivoriana.”
Tian’ny fiangonana any amin’ny Nosy Salomon ny fivoriana andavanandro, ary manao ezaka be izy ireo mba handraisany soa amin’ilay fivoriana. Maro ny fiangonana any amin’ny toerana lavitra ary tsy misy herinaratra any sady tsy misy Internet. Tsotra be ny fiainan’ny mpiara-manompo any. Inona no ataon’izy ireo mba hahazoana ny fitaovana handefasana ny video ampiasaina any am-pivoriana? Nanapa-kevitra ny mpitory tao amin’ny fiangonana iray any amin’ny nosy Malaita hoe hiaraka hivarotra voaniho nohamainina izy ireo. Nomen’izy ireo ny fiangonana ny vola azo mba hividianana fitaovana tsotra mandeha amin’ny herin’ny masoandro. Ary ahoana no hahazoany video isam-bolana? Misy rahalahy mankany amin’ny toerana akaiky indrindra misy Internet mba haka video, ary iny no zarainy amin’ny mpiara-manompo.
Izao no nosoratan’ny rahalahy iray any Etazonia: “Ny sary no tena mora hahaizako zavatra fa tsy soratra, ary efa nanahirana ahy nandritra ny 40 taona mahery izany. Tsy maintsy averimberiko vakina mantsy ny zavatra iray, izay vao haiko ny manazava azy amin’olon-kafa. Te hisaotra ny Filan-kevi-pitantanana àry aho amin’ny sary sy video rehetra navoakany. Tsara be ireo video fampidirana ny boky ao amin’ny Baiboly. Ireny sary ao amin’ny tari-dalana ireny mihitsy koa no ilaiko! Tena tahin’i Jehovah izao ezaka ataonareo ho an’ny vahoakany izao. Misaotra betsaka.”
NY FIAINANTSIKA KRISTIANINA SY NY FANOMPOANA—FIVORIANA VAOVAO
TANJONY Hahatakatra kokoa ny Tenin’Andriamanitra isika—2 Tim. 2:15
MAMPIAVAKA AZY Sary sy faritra azo anoratana
TANJONY Ho vonona hanompo eny amin’ny saha isika—2 Tim. 4:5
MAMPIAVAKA AZY Video sy fampisehoana fomba fitory modely
TANJONY Hahay hampihatra ny toro lalan’ny Baiboly isika isan’andro—1 Kor. 10:31
MAMPIAVAKA AZY Video avy any amin’ny Tele JW sy fanontaniana sy valiny amin’ny Fianarana Baiboly